Lamjung Manang News | » समाचारहरू समाचारहरू – Lamjung Manang News
बेसीशहरका दुइ पसलमा अागलागी, लाखाैंकाे क्षति
बेसीशहर, चैत्र १२ गते ।
बेसीशहरको मुटु भिमसेनस्थान नजिकै गएराती आगलागी हुँदा दुईवटा पसल जलेर लाखौंको क्षति भएको छ ।
भीमसेनस्थानमा रहेको इभरग्रीन दोहोरी साँझको अगाडि होम रानाको टहरामा रहेका दुईवटा पसलमा गएराती साढे ११ बजे आगलागी भएको हो । विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको अनुमान गरिएको छ । आगलागीबाट सुष्मिता एण्ड सुमन जिन्स टेलर्स र सोही सटरको आडमा रहेको रुपेश रानाको कम्प्युटर पसल जलेर ध्वस्त भएका छन् ।
सुष्मिता एण्ड सुमन जिन्स टेलर्सका प्रोपाइटर उत्तम त्रिखत्रीले राती साढे १२ बजे मात्र आफूले पसलमा आगलागी भएको थाहा पाएको र आएर हेर्दा पसल सबै ध्वस्त भइसकेको जानकारी दिए । उनले आगलागीबाट आफ्नो मात्रै ३० लाख भन्दा बढीको क्षति भएको बताए ।
आगलागी भएको स्थान नजिकै डेरा गरी बस्ने कर्मचारी पासाङ जिरेलले राती साढे ११ बजेतिर पसलमा आगलागी भएको र आगलागी निभाउन खोज्दा पसल अगाडि रहेको कामना सेवा विकास बैंकको बोर्ड जलेर खस्दा आफ्नै टाउकामा चोट लागेको बताए । पसलमा आगलागी भएको केहीबेरमा नै स्थानीय बासीन्दाले थाहा पाइ आगो निभाउने प्रयास गरेकामा पछि नगरपालिकाको दमकलले आगलागी नियन्त्रण गरेको स्थानीयले बताए ।
एन्फाले दियाे मनाङ जिल्ला फुटबल संघलाइ सदस्यता
बेसीशहर, चैत ११ गते ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ मनाङ जिल्ला फुटबल संघलाइ सदस्यता दिएकाे छ ।
विराटनगरमा सम्पन्न भएको १८ औं साधारणसभाले मनाङ जिल्ला फुटबल संघलाई सदस्यता प्रदान गरेको हाे । ८ बर्ष सम्म निरन्तर र अथक प्रयास पछि मनाङ जिल्ला फुटबल संघले एन्फाकाे सदस्यता पाएकाे हाे ।
जिल्ला फुटबल संघ मनाङलाइ एन्फाकाे सदस्य बनाउन धेरैले मेहेनत गरेका थिए । यस कार्यमा खट्ने संघीय संसद कर्म घले , मनाङ मर्स्याङदी क्लबका भु.पु. अध्यक्षहरू टासी घले , जाम्लीङ घले , जिम्मी गुरूङ , एन्फाका अध्यक्ष कर्म छिरिङ शेर्पा ,एन्फाका सदस्य बिजय घले लगायतलाइ यस अभियानमा सहयाेग पुर्याएकाे भन्दै मनाङका फुटबल प्रेमीले धन्यवाद दिएका छन् ।
मनाङका फुटबलप्रेमी, समाजसेवी, पर्यटन ब्यवसायी विनाेद गुरूङले दिएकाे जानकारी अनुसार एन्फाले दिएकाे सदस्यता मनाङ जिल्ला फुटबल संघका सचिव दूधबहादुर गुरूङले ग्रहणा गरेका थिए ।
मनाङमा पहिलाे पटक बस, माथिल्लाे मनाङकाे सडक पनि खुल्याे
धारापानी (मनाङ), चैत्र ११ गते ।
विकट हिमाली जिल्ला मनाङमा पहिलाे पटक बस गुडेकाे छ । यसअघि मनाङमा यात्रु बाेक्न जीप र मालसामान ढुवानीका लागि ट्रयाक्टर तथा ट्रकहरू मात्र चल्ने गरेका थिए ।
हिमालपारीकाे जिल्ला मनाङमाकाे सडककाे स्तराेन्नति गरिएपछि मनाङसम्म बस गुड्न सक्ने भएकाे हाे । यद्यपी ठूला बसहरू भने अझै पनि मनाङमा चल्न सक्ने अवस्था छैन । हाल उपल्लाे मर् स्याङदी जलविद्युत अयाेजनाकाे निर्माणका लागि चिनीया कम्पनी सिनाे हाइड्राेले मनाङकाे सडककाे स्तराेन्नतिकाे काम गरिरहेकाे छ । सडककाे स्तराेन्नतिसंगै मनाङमा साना तथा मझाैला मालबहाक ट्रकहरू भने गुडीरहेका छन् ।
ठूलै जाेखिम माेलेर पहिलाे पटक ग १ ख ४६०२ नम्बरकाे यात्रुबहाक बस मनाङ पुगेर अाइतबार फर्केकाे छ । बाहुनडाँडाबाट पर्यटक र उनीहरूका बन्दाेवस्तीका सामान लिएर मनाङकाे काेताेसम्म गएकाे साे बस मनाङकाे चामे पुगेर फर्केकाे छ ।
धारापानीबाट चामेतर्फ लाग्दै गरेकाे बस । तस्वीरः थुतेन लामा
साे बसका चालक प्रेम भण्डारीले मनाङकाे तालसम्म सडक राम्रै रहेकाे र टुह्वील गाडीहरू पनि पुग्न सक्ने बताए । उनले भने – ताल भन्दा माथि अलि अप्ठेराे छ, फाेरह्वील नभएका गाडीलाइ समस्या पर्छ । अझ तिमाङभन्दा माथि बढी गाह्राे छ ।
चालक भण्डारीका अनुसार साँघुराे सडकमा घुम्तीहरू पनि साँघुरै भएकाले लामाे बडी भएका सवारी साधनलाइ सडकमा समस्या पर्छ । साना बडी भएका र फाेरह्वील भएका सवारीहरू भने माथिसम्म जान सक्छन् ।
डरलाग्दा भीरहरूमा कटिङ गरी नेपाली सेनाले मनाङसम्म माेटरबाटाे खुलाएकाे थियाे । बेसीशहरबाट मनाङ सदरमुकाम चामेसम्मकाे ६५ किलाेमिटर सडकमध्ये अाधा जस्ताे भागमा भीरैभीर पर्छ । साँघुराे, छंगाछुर भीरकाे बीचबीचै अप्ठेराे सडकमा अहिलेसम्म बस चालकहरूले बस चलाउने हिम्मत गर्न सकेका थिएनन् ।
यसैबीच हिमपातका कारण अबरूद्ध रहेकाे माथिल्लाे मनाङसम्मकाे सडकमा यातायात सञ्चालन हुन थालेका छन् । माथिल्लाे मनाङसम्म सडक खुलाउन मनाङका सांसदहरू कर्मा घले, पाेल्देन छाेपाङ गुरूङ, प्रदेश सांसद राजीव गुरूङ, पुर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरूङ लगायतले सहयाेग गरेका थिए ।
सडकभरी हिउँ जमेकाले गत माघदेखि माथिल्लाे मनाङमा सवारी साधन चल्न सकेका थिएनन् । केही समयअघि चामेसम्मकाे सडक खुलाएर थाेराङ ल सम्मकाे पदयात्रा मार्ग पनि खुलाइएकाेमा दुइदिन अघि मात्र माथिल्लाे मनाङसम्मकाे सडक खुलाइएकाे हाे । संघीय तथा प्रदेश सांसदहरू, पूर्व मन्त्रीहरू, स्थानीय तहकाे सहयाेगमा सडकमा डाेजर तथा एक्साभेटर लगाइ हिउँ फालेर सडक खुलाइएकाे हाे ।
हाल टंकी मनाङदेखि माथि खाङ्सारसम्मकाे सडक खुलाउने प्रयास भइरहेकाे छ ।
लमजुङमा फाेटाेग्राफर संघ गठन, अध्यक्षमा दनाइ
बेसीशहर, चैत १० गते ।
फाेटाेग्राफि पेशालाइ मर्यादित र ब्यवस्थित बनाउँदै पेशागत हकहितमा काम गर्ने उद्देश्यले लमजुङमा फाेटाेग्राफर संघकाे गठन भएकाे छ ।
सदरमुकाम बेसीशहरमा रहि ब्यवसायीक फाेटाेग्राफि गरिरहेका ब्यवसायीहरूकाे भेलाले शनिबार मिलन शर्मा दनाइकाे अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय जिल्ला संघकाे गठन गरेकाे हाे । लमजुङका पुराना पत्ररकार दनाइ बेसीशहरकाे मिलन फाेटाे स्टुडियाेका सञ्चालक समेत हुन् ।
संघकाे उपाध्यक्षमा तीर्थ गुरूङ (रेवन फाेटाे), सचिवमा राजेन्द्र थापा (शुभ फाेटाे), काेषाध्यक्षमा कलादेवी रानाभाट(कला फाेटाे) र सदस्यहरूमा जे.वि.लामा (जे.वि फाेटाे), दिनेश कुमार श्रेष्ठ (बिज्ञान फाेटाे), तिलप्रसाद गुरूङ (प्रगति फाेटाे), काशीराज गुरूङ र सकलदेव मणडल (अनिशा फाेटाे) छन् ।
भेलाले संघकाे सदस्यता विस्तार गरी जिल्लाभर छरिएर रहेका ब्यवसायीक फाेटाेग्राफरहरूलाइ संघमा समेटेर लैजाने निर्णय गरेकाे छ । संघकाे विधान तयार गरी यही बैशाखभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघलाइ विधिवत दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै विधान बनाउनका लागि तिलप्रसाद गुरूङकाे संयाेजकत्वमा सुजन बानिया र प्रमाेद अधिकारी रहेकाे उपसमिति पनि भेलाले गरेकाे छ ।
भेलाले ०७६ बैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी फाेटाेग्राफि सेवाकाे नयाँ दररेट कायम गरेकाे छ ।
सबै पेशा र ब्यवसायमा रहनेहरूले संस्थागत रूपमा एकताबद्ध भइ अाफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहेकाे सन्दर्भमा फाेटाेग्राफि पेशालाइ मर्यादित बनाइ फाेटाेग्राफरहरूकाे दक्षता अभिबृद्धि गराइ उनीहरूकाे सेवालाइ गुणास्तरीय बनाउन संघ गठन गरिएकाे र संस्थालाइ विधिवत रूपमा दर्ता गरेपछि फाेटाेग्राफरहरूकाे दक्षता अभिबृद्धिका लागि विभन्न तालिमहरू सञ्चालन गरी फाेटाेग्राफि सम्बन्धी नयाँ नयाँ प्रविधिबारे जानकारी गराउने उद्देश्य राखिएकाे नवगठित संघका अध्यक्ष दनाइले जानकारी दिए ।
नेटामा सिलाइकटाइ तालिम सम्पन्न
नेटा, चैत १० ।
मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नंं १० नेटामा सञ्चालित सिलाइकटाइ तालिम सम्पन्न भएकाे छ । मध्यनेपाल नगरपालिकाकाे सहयाेगमा सञ्चालित तालिममा वडाका १४ जना महिलाहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।
तालिमकाे समापनका अवसरमा सहभागीहरूलाइ मध्यनेपाल नगरपालिकाका मेयर रमेशकुमार पाण्डेले प्रमाणपत्र वितरण गर्दै सिकेकाे सीपलाइ ब्यवहारमा उतार्न अाग्रह गरे । सीपकाे सदुपयाेग गरेर ब्यवसाय गर्न सके गाउँमै राेजगारी सिर्जना हुन सक्ने भन्दै मेयर पाण्डेले नगरपालिकाले एक घर एक महिला राेजगारकाे नारा लिएकाे र याे सार्थक हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।
तालिमकाे समापनका अवसरमा प्रशिक्षार्थीहरूले प्रशिक्षणकाे क्रममा सिलाएकाे चाेलाे स्थानीय १ सय जना ज्येष्ठ अामाहरूलाइ वितरणा गरिएकाे मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष रामचन्द्र भणडारीले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षयराेगकाे चुनाैति, नेपालमा बर्षेनी ४५ हजार विरामी थपिन्छन्
बेसीशहर, १० चैत ।
‘समय अबकाे क्षयराेग अन्त्यकाे’ भन्ने नारासहित विश्व क्षयराेग दिवस अाज देशभर मनाइदै छ ।
नेपालमा वर्षेनी ४५ हजार नयाँ क्षयराेगी अर्थात् टीबीका बिरामी थपिने गरेका छन् । र क्षयराेगकै कारण वर्षेनी ५ देखि ७ हजार मानिसकाे मृत्यु हुने गरेकाे छ । गरेकाे राष्ट्रिय क्षयराेग केन्द्रले जनाएकाे छ ।
क्षयराेग दिवसकै अवसरमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङले बेसीशहरमा पत्रकारसंग अन्तरक्रिया गरी गतवर्ष देशभर १ लाख ९६ हजार ३ सय ६२ जनाकाे परीक्षण गर्दा ३२ हजार ४ सय ७४ जनामा क्षयराेग भेटिएको जानकारी दिएकाे छ । क्षयराेगका कारण विश्वभर बर्षमा १ कराेड मानिस संक्रमित हुने र १५ लाख मानिस मर्ने गरेकाे तथ्याङ्क साे अवसरमा प्रस्तुत गरियाे ।
क्षयराेगीमध्ये ९० प्रतिशत विकासाेन्मुख देशका छन् । यी देशका १५ देखि ५४ बर्ष उमेर समूहका मानिसमा क्षयराेगकाे संक्रमण बढी पाइएकाे छ । नेपालमा मृत्युकाे प्रमुख ७ कारणमा क्षयराेग पर्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएकाे छ ।
लमजुङमा गत बर्षसम्म ८६ महिला र ५९ जना पुरूषमा क्षयराेग भेटिएकाेमा चालु बर्षकाे कार्तिकसम्म थप ११ महिला र २१ पुरूषमा क्षयराेग देखिएकाे साे अवसरमा जानकारी दिइयाे ।
क्षयराेग संक्रमितमध्ये सदरमुकाम बेसीशहर र सुन्दरबजारमा बढी छन् । क्षयराेग जुनसुकै ठाउँमा पनि लाग्छ सक्छ । धुमपान गर्ने, दीर्घराेगी, कुपाेषण भएका बालबािलका, कारखानामा काम गर्ने मजदुर, उमेर ढल्केका बुढाबुढी र एचअाइभी एड्सका विरामीलाइर् क्षयराेगले बढी संक्रमण गर्ने अन्तरक्रियामा बताइयाे ।
कार्यक्रममा बताइए अनुसार स्वस्थ मानिसमध्ये ६० प्रतिशतमा क्षयराेगकाे जीवाणु हुन्छ । पछि गएर १० प्रतिशतलाइ क्षयराेग देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । याे राेग जहाँ पनि लाग्न सक्छ । विशेष गरी शहरी र तराइ क्षेत्रमा याे राेग लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ । क्षयराेग दुइप्रकारका छन् । याे राेग ८० प्रतिशत फाेक्साेमा लाग्छ । अर्काे फाेक्साेबाहिर शरीरका अन्य भागमा लाग्छ ।
याे राेग स्वासप्रस्वासका कारण एकबाट अर्काेमा सर्छ । क्षयराेग लागेकाे ब्यक्तिले खाेक्दा १/२ मिटर र हाछ्यूँ गर्दा ४/५ मिटर परसम्म क्षयराेगका कीटाणु बाहिर निस्कन्छन् र अन्य ब्यक्तिले स्वास तान्दा फाेक्साे भित्र पुग्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
क्षयराेगकाे उपचार सम्भव छ । स्वास्थ्यकर्मीकाे प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिने उपचार डट्स उपचार पद्दती प्रभावकारी छ । सन् २००१ देखि नेपालमा याे विधिले उपचार थालिएकाे हाे । नछुटाइकन प्रत्यक्ष निगरानीमा यसकाे अाैषधी सेवन गर्ने हाे भने याे राेग पूर्णतः निकाे हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख केशवप्रसाद चापागाइँले जानकारी दिए ।
सन् २०३५ सम्ममा यस राेग ९० प्रतिशतले घटाउने सरकारकाे लक्ष्य छ ।
एसइइ परीक्षा शुरू, राजनीतिज्ञ, सेलिव्रेटी र किरीयापुत्री पनि सहभागी
बेसीशहर, चैत्र १० ।
माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई आजबाट शुरू भएकाे छ । बिहान ८ बजेबाट शुरू भएकाे परीक्षामा देशभरबाट कूल ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भए ।
नेपालमा पहिलोपटक सङ्घीय संरचनाको स्वरूप अनुसार एसईई परीक्षा शुरू भएको हो । चैत्र २१ गतेसम्म चल्ने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थीहरू पनि सहभागी छन् ।
कूल परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४ सय ४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५ सय ५८ छात्रा छन् । परीक्षामा देशभर एक हजार ९६९ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ भने एक हजार ९६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १६७ सहकेन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५३५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएकाे छ ।
एसइइ परीक्षामा केही चर्चित अनुहार पनि सहभागी भएका छन् । नाम चलेका राजनीतिकर्मी र रंगकर्मीहरूले पनि यस बर्षकाे परीक्षा दिइरहेका छन् । नेकपाकी सांसद र सचेतक समेत रहेकी दाङकी शान्ता चाैधरी र चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धरले समेत यस बर्ष परीक्षा दिएका छन् ।
चाैधरी दाङकाे तुलसीपुरमा रहेको माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टरबाट परीक्षा दिँदैछन् । उनकी छाेरी विनु पनि यस वर्षको परीक्षामा बाल सिर्जनालय बोर्डिङ स्कुल, बसुन्धरामा परीक्षा दिदैछन् । कमलरी हुँदै राजनीतिमा अाएकी शान्ता चौधरी पारिवारिक तथा सामाजिक कारणले अध्ययनबाट वञ्चित थिइन । उनी महेन्द्र मावि, तुलसीपुरमा सञ्चालित खुला विद्यालयको परीक्षार्थी हुन् । उनको सिम्बल नं. ०५८८४५३ भी रहेको छ ।
दाङकाे माध्यामिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिँदै नेकपाका सचेतक शान्ता चाैधरी । तस्वीर साभारः अनलाइनखबर
उता काठमाडाैंमा चर्चित नायिका करिश्मा मानन्धर पनि एसइइ परीक्षामा सहभागी छन् । पछिल्लो समय उनी नयाँ शक्ति पार्टीकाे राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् । उबेलामा बढ्न नसकेकी करिश्मालाइ पनि एसइइ उत्तिर्ण गर्ने धाेकाे छ । काठमाडाैंकाे त्रिवेणी पब्लिक बोर्डिङ स्कुल मैतिदेवीमा अध्ययन गरेकी उनी विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय, डिल्लीबजार केन्द्रबाट अहिले परीक्षा दिइरहेकी छन् ।
परीक्षा शुरू हुनु अघि परीक्षा केन्द्रमा जाँदै नायिका करिश्मा मानन्धर । तस्वीर साभारः अनलाइनखबर
बेसीशहरकाे जनविकास मा.वि केन्द्रमा एकजना किरीयापुत्रीले एसइइ परीक्षा दिइ रहेका छन् । चितवनकाेश्रीराम वैदिक संस्कृत गुरूकूलका परीक्षार्थी दरेश पाैडेल किरियापुत्रीका रूपमा परीक्षामा सहभागी भएका हुन् । बेसीशहर नगरपालिकाकाे वडा नंं ७ घर भएका उनी अाफ्ना पिताकाे किरीयामा छन् । उनकाे परीक्षाकेन्द्र चितवन भए पनि पिताकाे काजकिरीयाका लागि घरमा अाएका र यसैबेला परीक्षा परेकाले बेसीशहरकाे जनविकास मावि परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा दिन पाउँ भनि परीक्षा बाेर्डमा अनुराेध गरेका थिए । परीक्षा बाेर्डले उनलाइ साेही केन्द्रबाट परीक्षा दिने ब्यवस्था मिलाइदिएकाे जनिवकास मावि केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष रत्नमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका अनुसार यसबर्ष लमजुङमा ७९ वटा सामुदायिक र निजी २१ गरी १ सय विद्यालयका २ हजार ९ सय ९० परीक्षार्थीले एसईई परीक्षा दिँदै छन् । जसमध्ये १ हजार ६ सय १४ छात्रा र १ हजार ३ सय ७६ छात्र परीक्षार्थी छन् । ग्रेड बृद्धिका लागि ३० जना परीक्षार्थी सहभागि भएका छन् । लमजुङमा एसईई परीक्षाका लागि जिल्लाभर १८ वटा केन्द्र तोकिएका र परीक्षालाई शान्त, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक सबै उपाय अबलम्बन गरिएकाे शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ लमजुङका प्रमुख नारायण रेग्मीले बताए ।
एसईई परीक्षा आईतबारबाट, देशभर ४ लाख ७५ हजार, लमजुङमा तीनहजार सहभागी हुँदै
बेसीशहर, चैत ९ गते ।
माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एसईई आइतबारबाट शु? हुँदै छ । परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
आइतबार बिहान ८ बजेबाट शु? हुदै छ । यस वर्षको एसइई परीक्षामा देशभरबाट कूल ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुने छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक सङ्घीय संरचनाको स्व?प अनुसार एसईई परीक्षा शु? भएको हो । चैत्र २१ गतेसम्म चल्ने परीक्षामा नियमित, ग्रेडवृद्धि र प्राविधिक धारका परीक्षार्थीह? सहभागी हुँदैछन् ।
कूल परीक्षार्थीमध्ये दुई लाख ३६ हजार ४ सय ४५ छात्र र दुई लाख ३८ हजार ५ सय ५८ छात्रा छन् । सबैभन्दा बढी प्रदेश नं ३ बाट एक लाख ६०२ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ३५ हजार ६२४ परीक्षार्थीले एसईई परीक्षा दिँदैछन् ।
परीक्षामा देशभर एक हजार ९६९ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको छ भने एक हजार ९६९ केन्द्राध्यक्ष, तीन हजार १६७ सहकेन्द्राध्यक्ष र २९ हजार ५३५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि पहिलोपटक एसइई परीक्षा व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन, उत्तरपुस्तिका खरीदलगायतका सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारले गर्ने तर परीक्षाफल भने परीक्षा बोर्डले नै प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिए ।
यस वर्ष प्रदेशअनुसार प्रश्नपत्र छपाई गरिएको र परीक्षामा साधारणतर्फको अनिवार्य छ विषयका फरक–फरक प्रश्नपत्र बनाइएको तथा प्राविधिक तथा संस्कृततर्फ सबै प्रदेशमा एकै प्रकारका प्रश्नपत्र बनाइएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।
लमजुङमा पनि परीक्षाको सबै तयारी पुरा भएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका अनुसार यसबर्ष लमजुङमा ७९ वटा सामुदायिक र निजी २१ गरी १ सय विद्यालयका २ हजार ९ सय ९० परीक्षार्थीले एसईई परीक्षा दिँदै छन् । जसमध्ये १ हजार ६ सय १४ छात्रा र १ हजार ३ सय ७६ छात्र परीक्षार्थी छन् । ग्रेड बृद्धिका लागि ३० जना परीक्षार्थी सहभागि हुनेछन् ।
प्रश्नपत्र तथा उत्तरपुस्तिकाह? सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा पु¥याइ सकिएको छ । सबै केन्द्राध्यक्षह? परीक्षा केन्द्रमा पुगिसकेका छन् ।
लमजुङमा एसईई परीक्षाका लागि जिल्लाभर १८ वटा केन्द्र तोकिएका र परीक्षालाई शान्त, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आवश्यक सबै उपाय अबलम्बन गरिने शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ लमजुङका प्रमुख नारायण रेग्मीले बताए ।
उनका अनुसार परीक्षालाई मर्यादित बनाउन केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक तथा कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक र परीक्षार्थीका लागि समेत आचारसंहिता जारी गरिएको छ ।
लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको कर्तब्य हुने बताए । परीक्षालाई मर्यादित बनाउन आचार संहिता लागू गराइएको भन्दै कसैको सानो गल्तीले परीक्षा भाँडिन नदिन परीक्षा केन्द्र परिवार, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सवैले आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए ।
प्रजिअ ढकालले परीक्षामा चिट चोर्ने, चोराउनेलाई कारबाही गरिने भन्दै कक्षाकोठामा चिट भेटिए परीक्षा दिन नपाउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
परीक्षाका लागि १८ जना केन्द्राध्यक्ष, र २१ जना सहायक केन्द्राध्यक्ष तोकिएका छन् । २ सय ५० परीक्षार्थीभन्दा बढी केन्द्र रहेका ३ केन्द्रमा सहायक केन्द्राध्यक्ष थप गरिएको छ । सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी १÷१ जना छन् । १८ परीक्षा केन्द्रमा १ सय ५० जना निरीक्षक रहने छन् ।
प्रकृति नारी समाजको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा सीता श्रेष्ठ
उदीपुर, चैत्र ९ गते ।बेसीशहरको शेरामा रहेको प्रकृति नारी समाजको आठौं साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन शनिबार सम्पन्न भएको छ ।
उदीपुरमा शनिबार सम्पन्न अधिवेशनले सीता श्रेष्ठका अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ । समितिको प्रथम उपाध्यक्षमा कृष्ण अधिकारी न्यौपाने, द्वितीय उपाध्यक्ष दीपज्योति प्रधान, सचिवमा अतिरुपा सेढाईँ, सहसचिव सुशिला सिलवाल, कोषाध्यक्ष सीता श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
समितिका सदस्यहरुमा कल्पना शर्मा दनाई, अनिता पौडेल, सुनिता मिश्र, निर्मला घिमिरे, विष्णुमाया श्रेष्ठ, माया खाती , पुण्यकुमारी सिलवाल, शान्ता खनिया, गंगा खनिया, पार्वती श्रेष्ठ र सरस्वती श्रेष्ठ चयन भएका छन् ।
कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष कमला केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।
बेसीशहरमा विभिन्न सामाजिक कार्यमा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको प्रकृति नारी समाजले महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्दै आएको छ । बेसीशहर बजारमा सभा समारोह, बिवाह, ब्रतबन्ध लगायतका शुभ कार्य गर्नका लागि स्थान अभाव खड््किरहेका बेला बेसीशहरको फिल्महल चोक नजिकै पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिको काउण्टरसंगै सामुदायिक भवनको निर्माण गरेको छ ।
दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि निमुखाले न्याय नपाएको कांग्रेस नेतृको आरोप
दोर्दी, चैत्र ९ गते ।
नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सीता गुरुङले कम्युनिष्टको दुई तिहाइको सरकार बन्दा पनि देशमा सुशासन दिन नसकेको र निमुखा जनताले न्याय पाउन नसकेको बताएकी छन् ।
नेपाल महिला संघ लमजुङको आयोजनामा दोर्दी गाउँपालिकाको नौथरमा शनिबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी गुरुङले सो कुरा बताएकी हुन् । सो अवसरमा उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि देशमा सुशासन भन्दा भ्रष्टाचार बढेको बताइन् ।
कञ्चनपुरमा गत साउनमा बलत्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारले अझै चासो नदेखाएको आरोप लगाउँदै नेतृ गुरुङले निमुखालाई न्याय दिन नसक्ने सरकारलाई सरकारमा बसिरहन नैतिकताले नदिने बताइन् । जनताका धेरै अपेक्षा रहे पनि जनअपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।
नेतृ गुरुङले नेपाली कांग्रेसले मात्र जनताका चाहना अनुसारका काम गर्न सक्ने दावी गर्दै उनले कांग्रेसले देशको विकासको जग हाल्नेदेखि देशमा संघीयतासहितको गणतन्त्र र नयाँ संविधान दिन सक्षम रहेको बताइन् ।
नेपाली कांग्रेस भित्र अब गुट उपगुटको राजनीतिको अन्त्य हुनु पर्ने भन्दै नेतृ गुरुङले कांग्रेसका नेताहरुले गुट त्यागेर एक ढिक्का भएर अघि बढे अझै पनि एक नम्बरको पार्टी हुने भन्दै नेताहरुलाई गुटको राजनीति अन्त्य गर्न आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस लमजुङका सभापति भेषबहादुर पौडेल, पूर्व राज्यमन्त्री रामबहादुर गुरुङ, पूर्व पार्टी सभापति तुलसी नारायण श्रेष्ठ, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु डा. टकराज गुरुङ, आनन्द घिमिरे, गमप्रसाद गुरुङ, विष्णुप्रसाद धिताल, छुपीमाया गुरुङ, खुशीमाया गुरुङ, जिल्ला कार्य समितिका सचिवद्वय हरिप्रसाद बराल, विष्णुमाया धिताल, जिल्ला कार्य समितिका सदस्य प्रेमबहादुर घिमिरे, क्षेत्रीय सभापतिहरु खड्गबहादुर गुरुङ र बृषराज गुरुङ लगायतका वक्ताहरुले मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।
नेपाल महिला संघ दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तामाया गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेविसंघ लमजुङका अध्यक्ष दीपक अधिकारीले सहजकरण गरेका थिए ।